Soft skills ကောင်းအာင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ – Live the Dream
Soft skills ဆိုတာ တော်တော်များများကြားဖူးကြမှာပါ။ မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် Soft skills ကို အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ လူအများနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မှု နဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု တို့ကိုဆိုလိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အများအားဖြင့် အလုပ်ဝင်တော့မယ် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တစ်ခုခုရွေးချယ်တော့မယ်ဆိုရင် လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက် တွေ ကျွမ်းကျင်မှုတွေ နည်းပညာတတ်ကျွမ်းမှု အပိုင်းတွေ ပြင်ဆင်ရမယ် ဆိုတာ ယေဘုယျအားဖြင့် နားလည်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေ တစ်နေ့ တစ်ခြားပြင်းထန်နေတဲ့ ဒီနေ့ခေတ်ကြီးထဲ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ကိုယ်က ဝန်ထမ်းကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်ချင်တယ် ကိုယ့်အလုပ်ထဲမှာ အသိအမှတ်ပြုခံချင်တယ် ဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ရုံနဲ့တော့ မလုံလောက်တော့ပါဘူး။ လုပ်ငန်းရှင်တွေဖက်ကလည်း ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့် ထားတဲ့အချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ရှိဝန်ထမ်းကို ရာထူးတိုးပေးရမယ် ဆိုရင်လည်း လုပ်ငန်းခွင်ကျွမ်းကျင်မှု အပြင် Soft skills ရှိတဲ့သူတွေကိုပဲ မျက်စိကျတတ်ပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ အလုပ်ရှင်တစ်ချို့ကလည်း ဝန်ထမ်းရွေးချယ်တဲ့အခါ ပညာရေးအထောက်အထားတွေ တပုံတပင်ထက် Soft skills ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှု အပိုင်းကိုသာ ဦးစားပေးလာကြပါတယ်။ Hard skills တွေဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ကျွမ်းကျင်မှု၊ နည်းပညာပိုင်း ကျွမ်းကျင်မှု တွေက သင်ပေးလို့ ရပေမဲ့ Soft skills ကတော့ တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား အကျင့်စရိုက်တွေနဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေတော့ သင်ပေးရ ခက်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ Hard skills က သင့်ကို အလုပ်ရနိုင်စေတယ် ဆိုရင် Soft skills က သင့်ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တစ်ခုလုံး အောင်မြင်အောင်လုပ်ဆောင် နိုင်တယ်လို့ တောင် ပြောကြပါတယ်။
Soft skills ဆိုတာ လုပ်ငန်းခွင်မှာမှမဟုတ်ဘဲ နေ့စဉ်ဘဝမှာလည်း လက်တွေ့အသုံးချရတဲ့ skill တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင် မဝင်ခင် ကျောင်းတက်နေစဉ် ကာလထဲက Soft skills ကောင်းအောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် လေ့ကျင့်ထားတာအကောင်းဆုံးပါ။ စာသင်ခန်းထဲမှာ အမြဲနေပြီး စာတွေပဲကြိတ်လုပ်မနေဘဲနဲ့ ကိုယ့်ကို မျက်စိပွင့် နားပွင့်စေမဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးတွေကို သွားကြည့်ပါ။ များသောအားဖြင့် စာမှစာပဲ လုပ်တတ်တဲ့ စာဂျပိုး book smart သမားလေးတွေက soft skills တွေမှာ အားနည်းတတ်ပါတယ်နော်။ ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် ကျောင်းတွေ တက္ကသိုလ်တွေမှာ ဒီ skills တွေ ဖွံ့ဖြိုးစေချင်လို့ လှုပ်ရှားမှုတွေ အသင်းအဖွဲ့လေးတွေ လည်း ရှိလာပါတယ်။ ကိုယ့်သူငယ်ချင်း အဖွဲ့ထဲမှာ ဒါမှမဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ Soft skills ကောင်းတဲ့သူ တွေက ပိုပြီး တက်ကြွနေသလို သူတို့က သိသိသာသာ အားသာချက်ရှိတာမျိူး မြင်တွေ့ရမှာပါ။ တစ်ဖက်မှာ ကျောင်းစာကိုလည်း မလစ်ဟင်းအောင်လုပ်ရင်း သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူတူ ကျောင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတွေ မှာလည်း ပါဝင်ရင်း နဲ့ ကျောင်းသားဘ၀ ကိုဖြတ်သန်းသွားမယ်ဆို ပျော်ဖို့အရမ်းကောင်းမှာပါ။ ၁၀တန်း ပြီးခါစလူငယ်တွေ အနေနဲ့လည်း တက္ကသိုလ် မတက်ခင်မှာ Hard skills တွေကို လေ့လာရင်းလည်း ဘဝအတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ Soft skills ကိုပါ လေ့ကျင့်သွားရင်း အချိန်ကို အကျိုးရှိရှှိ ဖြတ်သန်းဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ် နော်။
Soft skills လိုအပ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီ။ Soft skills ဆိုတာ ဘာလဲ? Soft skills လို့ပြောမယ်ဆိုရင် ကျယ်ပြန့် ပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ အခြေခံအကျဆုံးနဲ့ မရှိမဖြစ် တဲ့ skill ၄မျိုးလောက်ကို အတိုဆုံးနဲ့ အရှင်းဆုံး ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ ခုပြောပြတဲ့အထဲကမှ ဘယ်နေရာမှာ ကိုယ်ကအားသာတယ်၊ ဘယ်အချက်လေးတော့ လိုအပ်နေသေးတယ် ဆိုတာ စာဖတ်သူ လူငယ်တွေလည်း ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလိုက် ပါအုန်းနော်….
Soft skills လို့ ဆိုရင်
Communication skill – လူအများနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံ ရတဲ့အခါမှာ လိုက်လျောညီထွေ ရှိပြီး ရလဒ်ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ဖို့ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး နိုင်ခြင်းကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။
Teamwork – လူမှုပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာ အသင်းဖွဲ့ နဲ့ လုပ်ဆောင်တတ်ပြီးတော့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် အချင်းချင်း ဖေးမကူညီရင်း စည်းစည်းလုံးလုံး နေတတ်တာမျိုးပေါ့။
Problem solving skill – ကိုယ့်ရဲ့ နေ့စဉ်ဘဝထဲမှာ သို့မဟုတ် အလုပ်ထဲမှာ တွေ့ကြုံလာတဲ့ ပြသနာ၊အခက်အခဲတွေကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းပါ။
Time Management – ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အချိန်တွေကို သူ့နေရာနဲ့သူ စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ စည်းကမ်းတကျ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့ အရည်အချင်းမျိုးကိုဆိုလိုတာပါ။
Soft skills မှာ ဒီ ၄ခုထဲပါဝင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အခြေခံ အကျဆုံးနဲ့ လူငယ်တွေအတွက် အလိုအပ်ဆုံး ဖြစ်မဲ့ အချက်လေးတွေကို အရှင်းလင်းဆုံး မြင်သာအောင် ပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေမှာ တစ်ခုထဲမှာပဲ ချွန်ထွက်နေတာထက် အားလုံးကို မျှမျှတတ ဖြည့်စွက်ထားမှလည်း ဖြစ်မှာပါ။ Soft skills ပိုင်းမှာ သိသိသာသာ တိုးတက်လာစေမဲ့ နည်းလမ်းအချို့ကိုလည်း လူငယ်တွေအတွက် ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်။ လက်ရုံးရည်ရော နှလုံးရည်ပါ ပြည့်ဝတဲ့ အနာဂတ်လူငယ်များ ဖြစ်လာနိုင်ပါစေနော်…..။
အခုခေတ်မှာ အရမ်းကောင်းတာ တစ်ခုက နယ်ပယ်အသီးသီးက ပညာရှင်တွေက သက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာအလိုက် event တွေ seminar တွေကို မကြာခဏ လုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ကျောင်းတွေမှာဆိုလည်း ကျောင်းအလျောက် သင့်တော်ရာ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ပွဲလေးတွေ ရှိပါတယ်။ အများအားဖြင့် တော့ ဝင်ကြေးအခမဲ့ တွေ ဖြစ်တာကြောင့် ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ နယ်ပယ်အလိုက် အဲလိုပွဲလေးတွေ လိုက်တက်ကြည့်ဖို့ အကြံပေးပါရစေ။ ကိုယ်ကစီးပွားရေး စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် စီးပွားရေးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ပွဲတစ်ခု ခုကိုသွားလိုက်ပြီး အဲ့နယ်ပယ်က လူတွေနဲ့လည်း မိတ်ဆွေဖွဲ့လိုက်ပါ။ ဒီလိုကနေ အဆက်အသွယ်ကောင်းတွေ ရလာနိုင်သလို မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ များလာတဲ့အခါ Soft skills တွေထဲက အခြေခံဖြစ်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေး အပိုင်းလည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တိုးတက်လာမှာပါ။
စေတနာ့ဝန်ထမ်း လုပ်ခြင်းကလည်း သင့်ရဲ့ Soft skills ကို မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ အများကြီး အထောက်အကူဖြစ်မှာပါ။ Volunteer အလုပ်ဟာ အများအားဖြင့် အဖွဲ့အစည်းနဲ့ ညှိနိုင်းလုပ်ဆောင် ရတဲ့အတွက် အဖွဲ့အစည်း ကြီးရင်ကြီးသလောက် ကိုယ်နဲ့ အကျင့်စရိုက်တူတာရော မတူတာရော လူပေါင်းစုံနဲ့တွေ့ဆုံ ရမှာ အသေအချာပါပဲ။ Volunteer မဟုတ်လည်း အခြားလူအများနဲ့ တွဲဖက်လုပ်ကိုင် ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းမျိုးမှာ ပါဝင်ကြည့်ပါ။ အဲဒီအခါ ကိုယ်က လူတွေအကြောင်း ပိုပြီးလေ့လာနိုင်သလို Soft skills ပိုင်းဆိုင်ရာ တွေကို လက်တွေ့အသုံးချ ရမှာ ဖြစ်တဲ့ အတွက် အစပိုင်းမှာ နည်းနည်းခက်ကောင်းခက်လိမ့်မယ် ဒါပေမဲ့ နောက်ပိုင်းမှာ ကိုယ်ရှေ့လျှောက်ရမဲ့ အနာဂတ်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေမှာပါ။ တစ်ခါတစ်လေလည်း ပင်ပန်းရမယ်၊ တစ်ခါတစ်လေလည်း ပီတိဖြစ်ရမယ်၊ ပျော်စရာလည်းကောင်းမယ် ဒီအတွေ့အကြုံလေးတွေက နောင်ကျရင် ကိုယ်လွမ်းနေရမဲ့ အမှတ်တရ တွေလည်း ဖြစ်နေအုန်းမှာပါ။
Critical Thinking ကို အကျင့်လုပ်ပါ
Critical thinking ဆိုတာကတော့ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အောင် တွေးခေါ်တတ်တာမျိုးပါ။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု ပြသနာတစ်ခုအပေါ် တစ်ဖက်ပိတ်မဟုတ်ဘဲ အခြေအနေအရပ်ရပ် ကနေ ဝေဖန်သုံးသပ် တတ်ခြင်းလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Critical thinking ဟာ နေ့စဉ်ဘဝလှုပ်ရှားမှုမှာ မဖြစ်မနေ လိုအပ်တဲ့ Soft skills တစ်ခုပါပဲ။ လူတွေအများကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံဆက်ဆံဖူးတဲ့သူတွေ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာ အတွေ့အကြုံ များတဲ့သူတွေကတော့ သာမန်လူတွေထက် Critical Thinking အပိုင်းမှာ သိသိသာသာ ပိုမိုကောင်းမွန်တာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဥပမာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်အောင် တွေးခေါ်တတ်တဲ့ သူ အများစုအနေနဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်လာတဲ့အခါ ချက်ချင်းဖြေရှင်းလိုက်တာထက် ပြသနာရဲ့အရင်းအမြစ်ကို ရှာဖွေပြီးမှ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ဖြေရှင်းလိုက်တာ မျိုးပေါ့။ ဒီလိုကျွမ်းကျင်မှှုမျိုးက စာမှာပဲဖတ်ရုံနဲ့မလုံလောက်ဘဲ လူမှုဘဝထဲ တစ်ကယ်ကျင်လည်မှ သိနိုင်မှာဖြစ်လို့ အိမ်တွင်းပဲအောင်းမနေဘဲနဲ့ လက်တွေ့ရှင်သန်ကြည့်လိုက်ပါနော်။
လူတွေအားလုံးက တစ်နေ့မှာ ၂၄နာရီ ရတာချင်းတူကြပေမဲ့ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အချိန်ကိုအသုံးချပုံခြင်း ကွာခြားတဲ့အခါ ကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကို စည်းကမ်းတကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့သူကတော့ သူများထက်ပိုသာသွားတာပါပဲ။ အချိန်ရပါသေးတယ် အချိန်ရှိသေးတယ် ဆိုပြီးတော့ ထပ်ပြီးအချိန်ဆွဲပြီး မလိုအပ်တဲ့နေရာမှာ အချိန်တွေသွားဖြုန်းတတ်ကြသေးတယ်။ ဘယ်သူဖြစ်ဖူးလဲ စာလုပ်ပါမယ်ဆိုမှ ကိုယ့်အခန်းကို ကြည့်ပြီး ရုတ်တရက်ကြီး အခန်းရှင်းချင်လာတာတို့၊ လူဆိုတာလည်း စိတ်ကူးပေါက်ရင် ပေါက်သလို ကိုယ်လုပ်ရမဲ့အလုပ်ကလွဲ ကျန်တာအကုန် စိတ်ဝင်စားတာမျိုး။ Deadline အချိန် ကပ်လာမှ အသည်းအသန်တွေ လုပ်ရပြီး အမှားတွေနဲ့ ကမောက်ကမတွေ ဖြစ်သွားရင်တော့ အဆင်မပြေနိုင်ဘူးနော်။ ညအိပ်ခါနီးတိုင်း တစ်နေ့တာလုံး အချိန်တွေကို ကိုယ်ဘယ်လိုကုန်ဆုံးခဲ့လဲ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်ရင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကျေနပ်နိုင်မလား? အချိန်မလောက်နိုင်ကြတဲ့ ဒီခေတ်ကြီးထဲ ကိုယ့်အတွက် ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချိန် အလုပ်ချိန် လူမှုရေး၊ပညာရေး အတွက် အချိန် စသဖြင့် ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အချိန်တွေကို စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ စည်းကမ်းတကျ လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကလည်း စွမ်းရည်တစ်မျိုးပါပဲ။
လူငယ်တွေအနေနဲ့ ကိုယ့်ကို လမ်းညွှန်ထောက်ပြပေးနိုင်တဲ့သူ ဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေမှာ လူငယ်တချို့က ကိုယ်မလုပ်ကိုင်ဖူးတဲ့ အရာတစ်ခု ကို စတင်ရမယ်ဆိုရင် တွေဝေတတ်ကြတယ်။ ငယ်ငယ်ကတည်းက နည်းနည်းမှားရင် များများအပြောခံရတဲ့ အမှားမခံတဲ့ ဓလေ့ထုံးတမ်းတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာရတဲ့ မြန်မာလူငယ်အချို့ဟာ မှားသွားမှာကို ကြောက်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို မချနိုင်တဲ့အချိန်တွေ လမ်းပျောက်နေတဲ့ အချိန်မျိုးတွေမှာ အနောက်ကနေ တွန်းအားပေးတတ်တဲ့ စီနီယာ တွေရဲ့ ခွန်အားကလည်း တစ်ကယ်ကို အားဖြစ်စေပါတယ်။ စီနီယာတွေဆိုတာလည်း အမှားတွေကို ကြုံဖူးတွေ့ဖူးခဲ့တဲ့ ကိုယ်လို လူငယ်တွေပဲမို့ သူတို့ရဲ့ လမ်းညွှန်မှု တွေ အတွေ့အကြုံတွေကနေ အများကြီးသင်ယူနိုင်မှာပါ။